အသားကပ်ဘောင်းဘီလေးနဲ့ အရမ်းလှပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ယွန်းယွန်း | Panpyoelat
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက်ို ခင်ပွန်းနှင့်သဘောတူကာ လက်ထပ်စေပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် ၃ယောက်ကမ္ဘာလေးကို ဖန်တီးခဲ့သည့် အမျိုးသမီး
ချစ်သူလေးဦးစလုံးနှင့် အတူတကွ နေထိုင်နေသည့် အသက်၂၀အရွယ် မိန်းကလေး ပထမဆုံးသော ရင်သွေးလေးကို ရရှိခဲ့ပြီ
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အမေကိုယ်စား အမေ့ပုံစံတူအရုပ်လေးနဲ့ဘဲ ဘွဲ့ယူခဲ့ရရှာတဲ့ ကျောင်းသားလေး
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွင် အသက်အရွယ်သည် အဓိကမကျကြောင်း သက်သေပြသွားခဲ့တဲ့ ၃၁နှစ်အရွယ်ကောင်လေးနှင့် အသက်၉၁နှစ်အရွယ် အဖွားတို့၏ ခိုင်မြဲသောအချစ်
Home Celebrity အသားကပ်ဘောင်းဘီလေးနဲ့ အရမ်းလှပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ယွန်းယွန်း
အသားကပ်ဘောင်းဘီလေးနဲ့ အရမ်းလှပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ယွန်းယွန်း
Pan Pyoe Lat
ပရိသတ်ကြီးရေ…..ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်အားပေးချစ်ခင်မှု ရရှိခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်းကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။သူမဟာငယ်စဉ်ကတည်းက ပီပြင်ပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့် ပရိသတ်အချစ်တွေရရှိထားတဲ့အနုပညာရှင်လေးဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီးကိုပါ ရရှိထားတာပါ။
ယွန်းယွန်းဟာပြုံးလိုက်တိုင်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပါးချိုင့်လေးနဲ့လည်း ဖမ်းစားတတ်သလို ချစ်စရာဟန်ပန်လေးတွေနဲ့လည်း ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း ယွန်းယွန်းဟာ အောင်မင်းခန့်၊စည်သူဝင်း၊ သဇင်ထူးမြင့်တို့နဲ့အတူ Double Dating programရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီး အောင်မင်းခန့်နဲ့အတွဲညီလွန်းလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ယွန်းယွန်းဟာ မကြာခဏဆိုသလိုလည်းသူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှာပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အလှပုံလေးတွေကို တင်ပေးလေ့ရှိသူပါ။အခုဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ “Your Bae …..” ဆိုတဲ့ captionလေးနဲ့အတူ အားကစားဝတ်စုံလေးနဲ့ လန်းနေတဲ့ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာပါတယ်။ ကဲ…..ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous articleလုံးတင်းမို့မောက်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ
Next articleဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန် ဂျပန်အစိုးရ တောင်းဆို
အတွင်းအလှတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ ဆက်ဆီကျလွန်းနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်များ
ရင်ဖိုစရာအလှတွေနဲ့ မိမိုက်တင်းကိတ်လှပလွန်းနေတဲ့ အိချောပို
လုံးတင်းနေတဲ့အတွင်းအလှတွေကို ဆက်ဆီကျကျထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် အိန်ဂျယ်ကိုရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်များ
အနက်ရောင်ဇာပါးဖက်ရှင်လေးနဲ့ မိမိုက်လွန်းတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
အားယားမှောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း အတူတူဆော့ချင်တယ် လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ
Panpyoelat is your news, entertainment, music & fashion website. We provide you with the latest news and videos straight from the entertainment industry.
© Copyright 2020- Panpyoelat.com